Imithandazo yokubhaptizwa. ? Njengenkwenkwana nentombazana kunye noCorta [okwimo yomnqamlezo]
Imithandazo yobhaptizo Njengomfana nentombazana, bubufutshane obuhle kwaye obuhle kwinto yokuba ubhaptizo ngumsebenzi wokomoya kwaye kulapho sithe ukholo lwethu luye lomelezwa ngenxa yomthandazo.
Nokuba ungakanani na ubudala bomntu ukuba abhaptizwe, ukholo yinto engenanto yakwenza nobudala kodwa ngefowuni evakalayo isuka entliziyweni, umthandazo usetyenziselwa ukuqinisa lo mnxeba ukuze ukwazi ukuthwalwa ngaphandle kwentliziyo ngokholo kunye nenkalipho.
Kwimeko yobhaptizo lweentsana lwenziwa njengesenzo sokholo apho abazali babethelela kwasebancinci uthando lomsebenzi weNkosi.
1 Imithandazo yobhaptizo
2 1) Imithandazo yokuhanjiswa kwentombazana
3 2) Imithandazo yobhaptizo lwabantwana
4 3) Imithandazo yokuhambisa izimemo ezenziwa nguKristu
5 4) Umthandazo omfutshane we-christening
6 5) Imithandazo yobhaptizo lomnqamlezo
6.1 Ithandazela ntoni into yobhaptizo?
6.2 Ngaba ezi zivakalisi zinamandla ngokwenene?
Into ebalulekileyo kuyo yonke le nto yenziwa ngokuqiniseka nangalo lonke ulwazi. Imithandazo yobhaptizo inokwenziwa ngabazali, ootatomkhulu okanye nelinye ilungu losapho okanye umhlobo ohleli nomnxeba ukuba uyenze.
1) Imithandazo yokuhanjiswa kwentombazana
Bawo Othandekayo waseZulwini, siza phambi kwakho namhlanje ukuza kunika ubomi (igama lentombazana).
Ngombulelo kwisipho sobomi bakhe kusapho lwethu, kunye nokuqonda amandla akho amakhulu kunye nobulumko bakho, sicela intsikelelo yakhe ebomini bakhe namhlanje.
Wanga angayintombazana ephilayo, eyomeleleyo nenengqondo; Wanga angakhula ngobulumko bakho nangokhokelo lwakho ade abe ngumfazi njengoMariya uMama kaYesu.
Ngamana intombi yethu ingakhethwa nguwe ukufezekisa iinjongo zakho apha eMhlabeni. Oko kukuzithoba kwintando yakho, eyaziyo indlela yokukudumisa, ukukukhonza nokukuthanda.
Ke ufumana inkoliseko yakho yonke imihla yobomi bakhe, ukuba ufumana intsikelelo, imbeko kunye nentabalala.
Amantombazana la ayinenxalenye ethambileyo kwaye eethe-ethe ebangela ukuba bahluka kwaye yiyo loo nto imithandazo yabantu ababhaptizwayo ikhona into ethile kubo. Imiceli mngeni ethi impilo iqale ukuyibeka besebancinci inokuba namandla kwaye xa uthatha isigqibo sokubabhaptiza kwaye bona xa befunda imithandazo yabo sibashiyela izixhobo ezinamandla abanokuthi bazisebenzise kwixesha elizayo.
2) Imithandazo yobhaptizo lwabantwana
Kumkani weenkosi neeNkosi zeeNkosi, naphambi kobukho bakho obuzukileyo phambi kwakho ngobomi bonyana wethu (igama lomntwana).
Ndiyambulela kakhulu uThixo ngokusibona kufanelekile ukuba singabazali balo mntwana mhle. Siyathembisa ukukukhathalela, ukukuthanda kwaye sikukhokelele kwindlela elungileyo yobomi. Kodwa nathi namhlanje siza kuzokufumana intsikelelo ebomini bakho bonke.
Wanga angaba sisihlobo sikaThixo kwanjengoMoses isicaka sakho. Ngamana ungayazi kungekudala injongo yakho ebomini, ngamana ungangenisi kwinkqubo yehlabathi kodwa wenze intando yakho uphumelele ngokupheleleyo. Ngamana angalulama ukwamkela iimfundiso zakho kunye nobulumko bokwazisa ukuba wena, Thixo, uyinto yonke. Ukuba uyaqondakala kuncwadi nakwimithetho, onesakhono kumagama, ukuthanda ilizwe kunye nenkokheli.
Simsikelele ke ngenxa yozuko lwegama lakho elingaphezulu kwegama lonke.
Nabantwana banomthandazo wabo othile kuba amaxesha amaninzi indlela yabo phakathi kokukhula, banokuchaphazeleka zizinto ezininzi kwaye yiyo loo nto umthandazo obhaptiziweyo okhethekileyo wabantwana uba sisenzo sothando, ukholo kunye ukuhambisa Ilizwi leNkosi lithetha nathi malunga nento yokuyalela umntwana kunye neendlela zeNkosi kwasekuqaleni, kungoko ke ecaweni uthando kunye nokuziswa kobomi bokuzinikela kugcwele amaxesha okusondela kuThixo uYise kunye Bonke abangcwele bakho
3) Imithandazo yokuhambisa izimemo ezenziwa nguKristu
Ndibulela uThixo ngokundinika ubomi.
Enkosi kubazali bam ngokundibonisa indlela.
Enkosi kusapho lwam ngokundinika uthando lwabo.
Enkosi kubaxhasi bam ngokulawula unyango.
Ndiyakumema kubhaptizo lwam ngeCawa kaMay 22 nge-1: 00 pm kwiTempile yeNkosazana yethu yoMpofu. Ke ndikulindile ukuba utye kwigumbi lokuphumla elikwiStrato saseSan Luis 117. Enkosi.
Kubaluleke kakhulu ukuba ubukho bosapho lwethu kunye nabahlobo. Ke ngoko, kufuneka sithandaze sikumeme ngolonwabo.
Yiloo nto lo mthandazo wokumema uKrestu. Ungayisebenzisa ngokukhululekileyo izimemo zakho zobhaptizo.
4) Umthandazo omfutshane we-christening
NguThixo omangalisayo, uzuko nembeko kuwe, wena ukuphela komdali wobomi.
Silapha phambi kobukho bakho ukuba ubusikelele ubomi (igama lomntwana/ (Nine), lo mhle umntwana usinike unyana.
Siyanisikelela ukuze kuthi ga namhlanje, ubomi bakho buqalise ngesikhokelo nesikhuselo sakho. Ngamana unyana wethu angakhula esazi ukuba uMoya wakho oyiNgcwele ngoyena mhlobo wakhe. Ubomi bakhe bangaba neenjongo ezingapheliyo njengobomi buka-Abraham; kwaye njengaye, yiba nomonde wokulinda ukuzalisekiswa kwezithembiso zikaThixo, okholelwa kumazwi akho nakwiimfundiso zakho kwaye ngale ndlela intliziyo yakho ingamkholisa uThixo wethu.
Yiba ngunyana wethu osikelelekileyo, osempilweni, onamandla nonyana ophumelelayo ukuze kuzukiswe uThixo.
Imithandazo inamandla nokuba ihlala ixesha elide kangakanani okanye imfutshane, yeyiphi eyona nto ibaluleke kakhulu ngokholo olwenziweyo .. Ebhayibhile kukho imizekelo emininzi esinokufumana kuyo apho sithetha ngezivakalisi ezifutshane ezaziphendulwa ngexesha elikhawulezileyo kunye Yile nto kufuneka siyikhathalele. Kukho imithandazo emide engenalo ukholo kunye nemithandazo emifutshane enamandla, konke kuxhomekeke kukholo onalo hayi ixesha oligcina ngalo.
5) Imithandazo yobhaptizo lomnqamlezo
Ukuba ufuna ukufumana eminye iminqweno yobhaptizo ilungele ukuprintwa, sinayo ngasentla apha ngendlela yomnqamlezo. Yeyona nto intle sayifumana. Thatha ithuba elipheleleyo!
Ithandazela ntoni into yobhaptizo?
Imithandazo isinceda Ukucoca umphefumlo kunye nomoya wethu Uhlaziywa kwinkqubo yonke yomthandazo kuba kuthatha ixesha kwaye uzinikezela ekucebiseni umphefumlo. Ukusukela mhla silungele ukuthandaza, kuqala ukusebenza kuthi, kuba ukunikezela ngexesha lethu lokuthobela uThixo kubhetele kunalo naluphi na omnye umnikelo esinokuwenza. Kwimeko yobhaptizo, kubaluleke nangakumbi kuba kaloku ukuzahlulela kokomoya kwenziwa phambi koThixo.
Imithandazo yobhaptizo isebenza ukulungiselela umoya wethu ukuze isenzo senziwe. Ukuba ubhaptizo lusebantwaneni ke ngale mithandabuzo sinokucela ikamva, ukuze uThixo aqhubeke ekhokela amanyathelo abo kwaye abagcine kufutshane neefowust zabo ngamaxesha onke.
Ngaba ezi zivakalisi zinamandla ngokwenene?
Yonke imithandazo Yenziwe ngokholo inamandla amakhulu kwaye yiyo loo nto ke iye yaba sisixhobo sokomoya esinokuhlala sisisebenzisa naphina apho sikhona kwaye nokuba sinzima kangakanani na into esiyicelayo.
Imithandazo inokubangela ukuba nokuba abafileyo bavuke emangcwabeni abo njengoko sibona kwilizwi lika UThixo kumzekelo kaLazaro yokuba wayesele eneentsuku ezininzi efile kwaye nelizwi nje elinye wabuya wavuka.
Iidayos, Injongo, Santos